Home Wararka Rasaas xooggan oo xalay saqdii dhexe laga maqlay qaybo kamida Garoowe
Rasaas xooggan oo xalay saqdii dhexe laga maqlay qaybo kamida Garoowe
Taliska Qaybta Booliiska Gobolka Nugaal ayaa faahfaahin ka bixiyay Rasaas xooggan oo xalay saqdii dhexe laga maqlay Caasimadda Garoowe.
Taliye ku xigeenka Qaybta Booliiska Gobolka Nugaal G/sare Ilyaas Isaaq Maxamuud oo hadal kooban siiyay Puntland Post ayaa sheegay in Rasaastaas dhexmartay Booliiska oo hawlgal ku jiray iyo Cabtooy hubaysan.
G/sare Ilyaas ayaa xaqiijiyay in aysan jirin wax khasaare ah oo ka dhashay iska hor-imaadka labada dhinac oo ka dhacay nawaaxiga buundada dhinaca bari ka xigta magaalada Garoowe.
Sidoo kale wuxuu ku hanjabay in tallaabo adag laga qaadi doono kooxaha ka ganacsada Khamriga oo sida uu sheegay halis ku ah Amniga Caasimadda iyo guud ahaan Gobolka Nugaal.
Previous articleXubno ka tirsan Gollaha Shacabka oo maanta Muqdisho lagu doortay
Next articleShirkii 35aad ee madaxda Afrika oo ka furmay magaalada Addis Ababa
Al-Shabaab oo saakay weerartay bar koontorool oo ku taala degmada Balcad
Soomaaliya oo Masar kala safatay Itoobiya, diidayna qaraar lagu taageeri lahaa